मनोरञ्जन Archives - DerbyKhabar
काठमाडौँ १२ कार्तिक।। सांगीतिक क्षेत्रमा अनबरत रुपमा समर्पित गाएक ,संगीतकार, तथा संगीत प्रशिक्षक नरहरी प्रेमीको र बिशु के.सी को नयाँ गीत “नरोज माया हतारमा ” सार्बजनिक भएको छ । बिशु के.सि को सब्द,रहेको गीतमा संगीत नरहरी प्रेमीकै रहेको छ । जी एम बगरको स्टोरी डिरेक्सनमा निर्माण भिडियोमा कोरियोग्राफर रुपमा दिपक पन्त रहेका छन् । फरक धारमा निर्माण भिडियोमा सुनिल[Read More…]
October 29, 2021 —	0 comments —
रंगकर्मि,निर्देशक तथा कलाकार सुरेन्द्र क्षेत्रीसंग हाम्रा सहकर्मि दिनेश फुयालले गर्नुभएको छोटो भलाकुसारी । सुरेन्द्रजी तपाईलाई स्वागत छ डर्बी खबर डट कम”मा । धेरै धेरै धन्यबाद दिनेशजी तपाईलाई । के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि ? हामी संगैका सबै कलाकाहरूको टिम मिलेर एउटा चलचित्र निर्माण गर्न गईरहेका छौ, सम्बभत अबको केही दिनमै सुटिङ पनि हुने छ र उक्त चलचित्रको कास्टिङ डाइरेक्टरको जिम्मा[Read More…]
March 8, 2021 —	0 comments —
तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ त ? ७ बर्षको उमेरमा के गर्न सकिन्छ भनेर, हामी सजिलै भन्छौ खेल्ने, खाने, पढने इत्यादि भनेर । तर हामी सबैले केही समय अघि एक जना सानी नानीको जादूमय स्वर र लाइभ दोहोरी सुनेका हेरेका र जाताततै प्रशंसाले भरिपूर्ण भएको खबर पनि मिडियामा भाईरल भएको थियो । ति नानी हुन गुल्मी शान्तीपुरकी रबिना बसेल जस्ले देशभर तहल्का[Read More…]
December 6, 2020 —	0 comments —
काठमाडौँ १९ मंसिर ।। तिम्रो मेरो नाता के हो बोलको गित , भिडियो सहित सार्वजनिकभएको छ । भर्खरै सार्वजनिकभएको गितमागायिकाजुनु राईको सुमधुर आवाज रहेको छ गितलाई संजितलामाले संगीतदिएका छन् भने रोमन ब्रजचार्यले एरेन्ज गरेका हुन् । भिडियोलाई मनोज बस्नेतले निर्देशन गरेका छन् भने तकेन्द्र शाह द्धारा सम्पादनगरिएको छ । नजिर हुसेन र कुसुम गुरुडको मुख्यभुमिका रहेको यस भिडियोमा लभ स्टोरी[Read More…]
December 4, 2020 —	0 comments —
केशव क्षेत्रीको देखेको पाइन्न बोलको गित भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । यस गितमा चर्चित गायक केशव क्षेत्री र जुना क्षीको सुमधुर स्वर रहेको छ । गीतलाई इश्वर सिडले संगीत दिएका छन् भने आषिष अविरलले एरेन्ज गरेका हुन् । गणेश शापकोटाको छांयाकड रहेको भिडियोमा होम गुरुडको निर्देशन र सुवास अम्वेडको सम्पादन रहेको छ । यस भिडियो मार्फत हाम्रो देशको राष्टिय[Read More…]
December 3, 2020 —	0 comments —
मंसिर ०२ काठमाडौँ ।। बिक्रम आचार्य को “बसमाया” भिडियो सहित सार्बजनिक भएको छ । हाल अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका बिक्रम आचार्य को “बसमायामा” यो पहिलो प्रयास हो। “बसमायामा” बोलको गीतलाइ चर्चित गायिका मेलिना राई र डेविड संकर को सुमधुर स्वर सजिएको गीतलाई युवा संगीतकार दीपक सर्माको सब्द संगीतले र नरेन्द्र वियोगी को एरेन्ज ले झन् सुनमा सुगन्ध थपिएको छ ।[Read More…]
November 17, 2020 —	0 comments —
काठमाडौं । भारतीय चर्चित गायिका नेहा कक्कडले विबाहको तयारी गरेकी छिन् । नेहाले प्रेमी पंजाबी गायक र अभिनेता रोहनप्रीत सिंहसँग लगनगाँठो कस्ने तयारी गरेको भारतीय मिडियाले जनाएको छ । रोहनप्रीत रियलिटी शो राइजिंग स्टार २ का रनर – अप हुन् । उनी शो मुझसे शादी करोगेमा पनि देखा परेका थिए । यो जोडीले मुम्बईमा २४ अक्टोबरमा विवाह गर्ने तयारी गरेको[Read More…]
समिर आचार्य र सुरेखाको भुर भुर पुतली बोलको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक
भदौ १३काठमाडौं ।। गायक समिर आचार्य र सुरेखाको भुर भुर पुतली बोलको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक छ । गायक समिर आचार्य र गायिका सुरेखा क्षेत्रीको यो गीतमा नवराज कलौनी र राजेन्द्र भट्टको शब्द रहेको गीतमा राजेन्द्र भट्ट र मीस्टर आरजेको संगीत रहेको छ । भिडियोलाई विधान कार्कीले निर्देशन गरेका हुन् । उत्सव दाहालको छायांकन रहेको भिडियोमा विकास दाहालको सम्पादन छ ।[Read More…]
पछिल्लो पुस्ताका उदयमान गायक,सर्जक तथा सङ्गितकार रमेश नेपालीसंग सहकर्मी दिनेश फुयालद्वरा रिएको साङ्गितिक भलाकुसारी……. रमेशजि तपाईलाई स्वागत छ ! हिजो आज के काममा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? धेरै धेरै धन्यवाद दिनेशजि,हिजो आज गित सङ्गितमै ब्यस्त छु,निरन्तरता दिदै छु गित सङ्गितकै कामलाई कहिले रेकर्डिङ हुन्छ त कहिले सुटिङ हुन्छ। सुरुका दिनहरुको बारेमा बताउनुहोस गायन छेत्रमा कसरी लाग्नु भयो ? सुरुका दिनहरुको बारेमा[Read More…]
July 31, 2020 —	0 comments —